जब टुट्छ सम्बन्ध - National News
जब टुट्छ सम्बन्ध
हरेक मानव सम्बन्ध विश्वासको डोरीमा अडिएको हुन्छ । फेरि यो डोरी यति कमजोर हुन्छ कि मानिसहरुको मन फाटेसँगै यो डोरी पनि चुँडिन जान्छ । त्यसैले विश्वासको डोरी सकेसम्म चुँड्न दिनु हुँदैन ।
तर, मानिस हो कुनै बेलामा जानेर वा अन्जानमा पनि गल्ती हुन सक्छ । त्यही गल्तीका कारण लामो समयदेखिको सम्बन्ध पनि एउटै व्यवहारका कारण तोडिन सक्छ । यदि कुनैपनि सम्बन्धलाई जान अन्जानमा धोका दिईयो भने त्यो सम्बन्धलाई फिर्ता लिन कठिन हुने गर्छ । कुनैपनि सम्बन्धलाई अघि बढाउनको लागि भरोसा जरुरी विषय हो ।
यदि जान अन्जानमा तपाईंले कसैको भरोसा तोड्नु भएको छ भने त्यही सम्बन्धलाई फिर्ता पाउनको लागि धेरै कोसिस जरुरी हुन्छ । कुनैपनि कुरामा साथीको मन दुखेको थाहा पाएपछि आफ्नो साथीसँग कुरा गर्ने र उसलाई आफ्नो समस्या सुनाउने प्रयास गर्नुहुन्छ । त्यति गर्दा पनि साथीको मन फर्किएन भने के गर्ने ? त्यसको लागि हामी निम्नलिखित उपायहरु अपनाउन सक्छौं ।
आफैंलाई माफ गर्नुहोस्
तपाईंको कुनै गल्तीले आफ्ना पार्टनरलाई समस्या परेको छ र उसको मन दुखेको छ भने पार्टनरसँग माफी माग्नुपर्छ । माफी माग्नु पहिले हामीले आफूलाई नै माफ गर्नु आवश्यक छ । मानिसको स्वभाव नै यही हो कि तपाईंले आफ्नो गल्ती क्षमा नगरेसम्म कोही पनि उसलाई माफ गर्न सक्षम हुँदैन । कुनै पनि सम्बन्धमा आत्मविश्वास ल्याउनुअघि तपाईले आफूलाई बढी विश्वास गर्नु पर्छ । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईंले आफ्नो गल्ती पहिचान गर्नुहोस् र भविष्यमा यो गल्ती दोहोर्‍याउन कोसिस गर्नुहोस् र तपाईंको साथीलाई चोट नपुर्‍याउनुहोस् ।
भावनाहरू व्यक्त गर्नुहोस्
सर्वप्रथम तपाईंले आफ्नो पार्टनरको अगाडि स्वीकार गर्नुपर्छ कि तपाईंले उसको विश्वास तोड्दै गल्ती गर्नुभयो । तर, आफूलाई त्यो गल्तीका कारण पछुतो लागेको समेत उनीहरुलाई बताउनुपर्छ । त्यसपछि आफ्नो भावनाहरू व्यक्त गर्नुहोस् । यी सबै चीजले तपाईंको पार्टनरलाई असर गर्न सक्छ र तपाईंले उनीहरूको भरोसा फिर्ता लिन सक्नुहुनेछ ।
आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित कुरा सुनाउनुहोस्
यदि तपाईं सकेसम्म आफ्नो साथीको भरोसा चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो जीवनसाथीसँग सम्बन्धित सबै कुराको बारे आफ्नो पार्टनरलाई भन्नुपर्छ ताकि उसलाई तपाईप्रति कुनै प्रकारको शंका नहोस् । तपाईं पार्टनरसँग कुनै पनि गोपनीयता नराख्नुहोस् । यससँग तपाईंको साथीले यो बुझ्दछ कि तपाईंले भविष्यमा उहाँसँग कुनै गल्ती गर्नुहुन्न न त तपाईं धोका दिनुहुनेछ ।
क्षमाको लागि सोध्नुहोस्
तपाईंको सम्बन्धमा विश्वास फिर्ता ल्याउन तपाईंले आˆनो पार्टनरसँग माफी माग्नु आवश्यक छ । तपाइँको पार्टनरलाई विश्वास गर्नुहोस् कि जे पनि गल्ती तपाइँसँग भयो त्यो अब भविष्यमा हुनेछैन ।
मारुती सिमेन्टलाई एनएस क्वालिटी अवार्ड २०१९
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?
३७८ वर्ष पुरानो कार्तिक नाचमा जे देखियो
जाडोयाममा सुन्तला : स्वास्थका लागि फाइदाजनक